DAAWO: Sergio Aguero Iyo Marco Reus Oo Tartan Hal Ka Hal Ah Iskaga Horyimid Dhacdo Lagu Furayay Kabo Cusub Oo Ay Shirkada Puma Soo Saartay – Cayaaraha dunida
England | By admin
Xidigaha kooxdaha Manchester City iyo Brussia Dortmund ee Sergio Aguero iyo Marco Reus ayaa tartan hal ka hal ah isaga hor yimid dhacdo lagu soo bandhigayay kabo cusub oo ay shamaysay shirkada qalabka Isboortiga ee Puma.
Goobtan ay ku tartamayeen Aguero iyo Reus ayay dadabadani daawanayeen. Aguero ayaa xili ciyaareedkan qaab ciyaareed fiican soo bandhigay inakasta oo ay dhaawacyo dhibaateeyeen. Aguero ayaa hogaanka gool dhalinta horyaalka Ingiriiska la wadaaga Harry Kane, waxayna leeyihiin min 20 gool.
Markii uu tartankani dhamaaday ayuu Aguero amaanay xidiga ree Jarmal tartanka adag ee uu kala kulmay, wuxuuna Aguero u qiray in Marco Reus uu yahay ciyaartoy kubbada cagta hibo u leh, waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: “Waxa waajib ah inaan qirto in Marco uu xaqiiqdii yahay nin hiboleh, hogaamintaydiina nasiibdaro waxay ku dhamaatay daqiiqado yar kadib. Garoonkan waan jecelahay, waana mid xiisoleh, gaar ahaan marka aad la ciyaarayso ciyaartoy cusub kaas oo aanad maalin kasta tababarka kula kulmayn”.
Sidoo kale Marco Reus ayaa amaanay xidiga ay iska horyimaadeen ee Sergio Aguero wuxuun ayidhi: “Anigu waan hubaa inaad ka arki kartaan filimka, laakiin aan idiin sii xaqiijiyee, Aguero xaqiiqdii waqti adag ayuu ibaday, waa nin deg deg badan kaas oo dhiiran, run ahaantiina aad ayay u adkayd in aan ilaaliyaa”.
Aguero ayaa markii danbe wax laga waydiiyay kooxdiisa Manchester City iyada oo la waydiiyay inayfursad u haystaan ay Chelsea ku soo qabtaan wuxuuna yidhi: “Waxaad sheegtay inay shan kulan hadheen, laakiin shantaa kulan ayay wax badani dhici karaan, si adag ayaanu u shaqayn doonaa si aanu ugu dhamaysano sida ugu fiican ee ugu suurtogalsan”. HALKAN KA DAAWO WIXII KALA QABSADAY AGUERO IYO REUS.